၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်သဃံဦးဆောင် အရှင်ဂ္ဘမီရ ကိုအနှောက်အယုက်ပေးနေတာကိုရပ်တန်းကရပ်ပြီး မ ဂ္ဂင် ကျောင်းတိုက်မှာ ပြန်လည်သတင်းသုံးခွင့်ပေးဖို့ AHRC အာရှလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် က ကြေညာချက် တစ်ခု ထုတ်ပြန်....AHRC Interview 10 March 2012 ~ Asian Human Rights Commission (Burma)
LATEST UPDATES IN BURMESE
Filled Under: ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်, ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်, သတင်း
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်သဃံဦးဆောင် အရှင်ဂ္ဘမီရ ကိုအနှောက်အယုက်ပေးနေတာကိုရပ်တန်းကရပ်ပြီး မ ဂ္ဂင် ကျောင်းတိုက်မှာ ပြန်လည်သတင်းသုံးခွင့်ပေးဖို့ AHRC အာရှလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် က ကြေညာချက် တစ်ခု ထုတ်ပြန်....AHRC Interview 10 March 2012
RFA 10 March (Morning Programme)
Interview on AHRC Urgent Appeal (BURMA: Repeated re-arrest of released monk)
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်သဃံဦးဆောင် အရှင်ဂ္ဘမီရ ကိုအနှောက်အယုက်ပေးနေတာကိုရပ်တန်းကရပ်ပြီး မ ဂ္ဂင် ကျောင်းတိုက်မှာ ပြန်လည်သတင်းသုံးခွင့်ပေးဖို့ AHRC အာရှလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် က ကြေညာချက် တစ်ခု ထုတ်ပြန်ပြီး မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို AHRC ရှေ့နေဦးမင်းလွင်ဦးက RFA ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။
ဦးမင်းလွင်ဦး။ ။ အာဏာပိုင်တွေက လာရောက်ခေါ်ယူပြီး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတဲ့ ကိစ္စတွေက ဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်ဘူး။ သာမန်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ ခေါ်ချင်တိုင်းခေါ်၊ပြန်ပို့ချင်တဲ့အချိန်မှ ပြန်ပို့ ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ တရားဥပဒေတွေနဲ့လည်း မညီညွတ်ဘူးဆိုတာ ပထမဦးဆုံးပြောချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အရှင်ဂမ္ဘီရ ကို အစိုးရပိုင်သတင်းစာတွေမှာလည်း ဓမ္မစက်နဲ့ တားဆီးလို့မရတဲ့အတွက် အာဏာစက်နဲ့ အရေးယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ ချိန်းခြောက်ပြောဆိုထားတဲ့အပေါ်မှာလည်း လူတစ်ယောက်အတွက်လွတ်လပ်စွာသွားလာနေထိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခွင့် တွေအပေါ်မှာ ကန့်သက်ထားရာရောက်တယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အကြောင်း မဲ့ ချိန်းခြောက်ပြောဆိုပြီးတော့ စွဲဆိုတဲ့ပြစ်မှုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဒါတွေက အစိုးရသစ်တရပ်အနေနဲ့ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော့အနေနဲ့ အလေးအနက်ထားပြီး တင်ပြပြောဆို လိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဥပဒေနဲ့ခေါ်ယူမေးမြန်းတာနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ဦးမင်းလွင်ဦးက
ဦးမင်းလွင်ဦး။ ။လူမြင်သူမြင်ရုံးတွေအတွင်းမှာ ခေါ်ယူစစ်ဆေးလို့ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သတင်းသုံးနေထိုင်ရာ ဒေသမှာ သွားပြီးတော့မေးမြန်းစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ အရှင်ဂ္ဘမီရ ကို နှစ်ကြိမ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ ည၁၀နာရီအချိန်တွေဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်း ညပိုင်းတွေဖြစ်နေတယ်။ ဒါတွေက လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်နေတယ်။ ဥပဒေမှာ လူတစ်ယောက်ကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းနိုင်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်။ သို့သော်လည်း ဒီလိုမျိုးညတွေအချိန်မတော်မှာ ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ပြဌာန်းထားခြင်းမရှပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ထောင်ထဲမှာ ညုင်းပန်နိုပ်စက်ထားခြင်းခံရတဲ့ ဒဏ်ကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခဲ့တာကို လိုအပ်သလို ဆေးဝါး ထောက်ပန့်ပေးဖို့နဲ့ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာကူညီပေးဖို့ ကိုလည်း AHRC က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
AHRC TV: Weekly Roundup ( 47)
Ahrc Human Rights likes
AHRC ( Statements)
Asian Human Rights Commission ( Statements)
Working Group on UPR
UPR Advance Question (2)
UPR Advance Question (1)
Report of Working Group on the UPR
ALRC-UPR -concerning rules of law and human rights in Myanmar(Annexe)
ALRC- UPR- concerning rules of law and human rights in Myanmar
HRDP Election Report ( Burmese Version)
HRDP Election Report( English Version)
့ပည်တွင်းစစ်ပွဲများ ရပ်တန့်ပေးဘို့ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြ ( photo from Mizzima) ကင်တာကီပြည်နယ်၊ လူဝီဗီးလ် တက္ကသိုလ်မှာ အမှာစကား ပြောကြားနေတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်( photo from VOA) ဖမျးဆီးခံရမှာကို စိုးရိမျ ပမေယျ့လညျး စီမံကိနျး ရပျဆိုငျးရေးကို ဆကျလကျ လုပျဆောငျသှားမယျလို့ ပွော ( photo from BBC)
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (မြန်မာဘာသာ)
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း (၂၀၀၈ ခုနှစ်) လေ့လာလိုသူများအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်...
မိုး​ပြာ​ရောင်ဘုန်း​ကြီး​ မတရား​သဖြင့်​ ​ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံ​နေရ...DVB.... 21 March 2012
မိုး​ပြာ​ရောင်ဘုန်း​ကြီး​ မတရား​သဖြင့်​ ​ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံ​နေရ Published on March 21, 2012 by မင်းလွင် · No Comments ...
အာရ်အက်အေမှ အပတ်စဉ်သောကြာနေ့တိုင်း ထုတ်လွှင့်နေသည့် ဦးမင်းလွင်ဦး၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ နှင့်လူထုဆောင်းပါးအမှတ်စဉ်(၉) နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆ...
Still in the grip of Burma's tyrants... Independent ...5April 2012
Still in the grip of Burma's tyrants Burma's reforms and by-elections have moved attention away from the country's politic...
BURMA: Speaker of legislature puts state sovereignty ahead of torture elimination- AHRC April 5, 2013
On 21 March 2013amember of the national legislature in Burma introducedamotion calling for the country to join the United Nations Conve...
2012 Ethics in Action → Vol.6No. 1 - February 2012 ..Ethnic wars must end for Burma to be 'on the right track' to democracy and development ..Article .. 8 March 2012
Ethnic wars must end for Burma to be 'on the right track' to democracy and development ...
(အာအက်ဖ်အေ ၄.၅.၂၀၁၁)မနှစ်ကသင်္ကြန်က X2O မဏ္ဍာပ်ရှေ့မှာ ဗုံးပေါက်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗုံးခွဲမှုနဲ့ တရားစွဲခံနေရတဲ့ ကိုဖြိုးဝေအောင်ဟာ အင်းစိန်အကျဉ်...
CIA ညွှန်မှူး မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားမည် .... 8 February 2012 Mizzima
CIA ညွှန်မှူး မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားမည် မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉ ...
kaghin legal aid network မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ရှေ့နေတဦးနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
မေး ဟုတ်ကဲ့ပါသမီးကိုမေးခွန်းလေးတခုမေးချင်လို့ပါ အန်တီက ahrc ကပါအန်တီသိချင်တာကသမီးတို့ကချငိဒေသမှာတိုင်းရင်းသားဒေသ တွေမှာရှိတဲ့လူ့အခွ...
Aung San Suu Kyi's victory does not bring Burma freedom.....Burma Campaign UK
Zoya Phan ( Burma Campaign UK) I have dreamed for many years of seeing Aung San Suu Kyi elected to parliament and watching thousands of ...
interview with staff (7)
urgent appeals (18)
Blog Archive Oct 14 (1) Oct 05 (1) Sep 30 (1) Sep 28 (1) Sep 22 (1) Sep 21 (1) Sep 19 (1) Sep 18 (1) Sep 15 (1) Sep 14 (1) Sep 11 (2) Sep 09 (1) Aug 27 (1) Aug 22 (2) Aug 18 (1) Aug 14 (1) Aug 12 (1) Aug 05 (1) Aug 03 (1) Jul 30 (1) Jul 14 (2) Jun 09 (1) May 27 (1) May 08 (1) Apr 25 (1) Apr 07 (1) Mar 17 (1) Jan 17 (1) Jan 07 (1) Sep 25 (1) Aug 22 (1) Aug 14 (1) Aug 01 (2) Jul 24 (1) Jul 23 (2) Jul 22 (1) Jul 21 (3) Jul 11 (1) Jul 09 (1) Jul 02 (1) Jun 26 (1) Jun 24 (3) Jun 19 (3) May 15 (3) Apr 05 (1) Apr 04 (4) Mar 30 (1) Mar 27 (5) Mar 19 (1) Jan 23 (2) Nov 22 (1) Sep 25 (1) Aug 24 (1) Aug 09 (1) Aug 07 (2) Jul 31 (3) Jul 13 (2) Jul 05 (3) Jun 26 (1) Jun 24 (1) Jun 20 (2) Jun 14 (2) Jun 12 (2) Jun 09 (2) Jun 02 (5) May 26 (2) May 24 (1) May 23 (2) May 21 (2) May 18 (1) May 14 (1) May 13 (1) May 08 (4) May 06 (3) May 01 (3) Apr 30 (2) Apr 28 (3) Apr 15 (1) Apr 10 (2) Apr 09 (2) Apr 05 (8) Apr 01 (3) Mar 31 (1) Mar 28 (4) Mar 26 (2) Mar 21 (3) Mar 20 (3) Mar 18 (2) Mar 15 (1) Mar 14 (1) Mar 13 (3) Mar 09 (6) Mar 07 (1) Feb 26 (1) Feb 23 (1) Feb 20 (1) Feb 19 (2) Feb 17 (3) Feb 14 (4) Feb 13 (1) Feb 10 (7) Feb 09 (6) Feb 08 (7) Feb 07 (8) Feb 04 (2) Feb 02 (10) Jan 31 (7) Jan 30 (4) Jan 29 (4) Jan 17 (8) Jan 14 (6) Jan 12 (1) Jan 11 (3) Jan 10 (3) Jan 07 (5) Jan 06 (1) Jan 05 (11) Jan 03 (3) Jan 02 (6) Dec 27 (6) Dec 26 (3) Dec 25 (4) Dec 22 (5) Dec 20 (5) Dec 14 (12) Dec 12 (3) Dec 10 (2) Dec 08 (6) Dec 06 (6) Dec 04 (7) Dec 03 (4) Dec 01 (6) Nov 29 (15) Nov 27 (3) Nov 26 (4) Nov 25 (4) Nov 24 (1) Nov 22 (7) Nov 21 (1) Nov 20 (6) Nov 17 (7) Nov 16 (4) Nov 15 (3) Nov 14 (5) Nov 13 (3) Nov 10 (1) Nov 08 (5) Nov 06 (9) Nov 05 (2) Nov 04 (1) Nov 03 (1) Oct 31 (2) Oct 30 (2) Oct 28 (1) Oct 26 (3) Oct 25 (2) Oct 24 (3) Oct 23 (1) Oct 19 (3) Oct 18 (8) Oct 13 (10) Oct 11 (3) Oct 09 (5) Oct 03 (6) Sep 29 (2) Sep 26 (2) Sep 25 (2) Sep 24 (1) Sep 22 (2) Sep 19 (2) Sep 18 (2) Sep 15 (2) Sep 14 (5) Sep 07 (1) Sep 04 (4) Sep 01 (1) Aug 31 (3) Aug 30 (2) Aug 29 (3) Aug 27 (1) Aug 26 (2) Aug 25 (10) Aug 24 (2) Aug 23 (3) Jun 12 (1) Jun 07 (3) May 31 (2) May 05 (1) May 02 (1) Apr 25 (2) Apr 15 (2) Apr 12 (1) Apr 11 (2) Apr 10 (1) Apr 04 (1) Apr 03 (1) Mar 30 (1) Mar 27 (4) Mar 23 (1) Mar 21 (1) Mar 16 (1) Mar 15 (1) Mar 11 (1) Mar 07 (1) Mar 06 (1) Feb 28 (2) Feb 24 (1) Feb 22 (1) Feb 21 (1) Feb 20 (1) Feb 18 (1) Feb 14 (1) Feb 13 (1) Feb 06 (2) Jan 26 (1) Jan 25 (2) Jan 20 (1) Jan 17 (1) Jan 15 (1) Jan 05 (1) Dec 10 (1) Dec 03 (1) Dec 02 (1) Nov 28 (1) Nov 10 (1) Oct 31 (1) Oct 23 (1) Oct 18 (1) Oct 08 (1) Oct 01 (1) Sep 26 (1) Sep 24 (2) Sep 20 (1) Sep 17 (2) Sep 15 (1) Sep 13 (2) Sep 11 (1) Sep 09 (1) Sep 08 (1) Sep 03 (1) Aug 30 (1) Aug 29 (1) Aug 27 (1) Aug 26 (1) Aug 25 (2) Aug 24 (1) Aug 19 (2) Aug 17 (1) Aug 14 (2) Aug 11 (2) Aug 10 (15) Aug 09 (1) Aug 07 (1) Aug 05 (2) Aug 04 (2) Jul 26 (1) Jul 08 (1) Jun 30 (1) Jun 27 (1) Jun 25 (1) Jun 17 (1) Jun 11 (1) Jun 07 (1) May 25 (1) May 14 (1) May 13 (2) Apr 26 (1) Apr 22 (1) Apr 20 (1) Apr 19 (1) Apr 18 (1) Apr 13 (2) Apr 11 (1) Apr 04 (1) Apr 03 (2) Mar 29 (1) Mar 21 (1) Mar 18 (2) Mar 16 (2) Mar 14 (1) Mar 06 (4) Mar 03 (2) Mar 02 (1) Mar 01 (1) Feb 26 (2) Feb 23 (1) Feb 22 (3) Feb 20 (2) Feb 18 (1) Feb 15 (1) Feb 06 (1) Feb 02 (1) Jan 28 (1) Jan 27 (2) Jan 25 (1) Jan 24 (1) Jan 23 (3) Jan 22 (1) Jan 21 (1) Jan 20 (1) Jan 19 (1) Jan 18 (1) Jan 17 (1) Jan 16 (1) Jan 13 (3) Jan 10 (2) Jan 08 (1) Jan 07 (2) Jan 06 (1) Dec 27 (1) Dec 26 (1) Dec 12 (1) Dec 11 (1) Dec 10 (1) Dec 09 (1) Dec 07 (1) Dec 03 (1) Nov 23 (1) Nov 21 (1) Nov 19 (1) Nov 17 (1) Nov 13 (1) Nov 08 (1) Nov 04 (1) Oct 31 (1) Oct 29 (1) Oct 28 (2) Oct 27 (3) Oct 23 (2) Oct 20 (1) Oct 19 (1) Oct 16 (3) Oct 13 (1) Oct 11 (1) Oct 08 (3) Oct 03 (1) Oct 02 (1) Oct 01 (1) Sep 25 (1) Sep 20 (1) Sep 15 (4) Sep 12 (2) Sep 08 (2) Sep 07 (1) Sep 05 (1) Sep 04 (1) Sep 03 (3) Sep 01 (1) Aug 30 (2) Aug 27 (1) Aug 24 (1) Aug 23 (1) Aug 19 (1) Aug 17 (2) Aug 16 (1) Aug 14 (1) Aug 11 (1) Aug 09 (1) Aug 08 (1) Aug 07 (1) Aug 04 (1) Aug 02 (1) Jul 31 (2) Jul 29 (3) Jul 28 (1) Jul 27 (1) Jul 26 (2) Jul 23 (1) Jul 20 (2) Jul 14 (2) Jul 12 (1) Jul 06 (1) Jul 03 (1) Jul 01 (1) Jun 29 (1) Jun 28 (1) Jun 27 (1) Jun 25 (1) Jun 23 (1) Jun 22 (1) Jun 21 (5) Jun 20 (1) Jun 18 (3) Jun 17 (1) Jun 16 (2) Jun 12 (1) Jun 09 (1) Jun 07 (1) Jun 04 (1) Jun 03 (1) Jun 02 (3) May 31 (1) May 30 (1) May 29 (1) May 27 (2) May 26 (2) May 25 (1) May 24 (3) May 23 (3) May 21 (1) May 20 (2) May 19 (1) May 13 (1) May 11 (1) May 10 (6) May 08 (1) May 06 (1) May 04 (1) May 03 (1) Apr 28 (2) Apr 26 (2) Apr 02 (1) Mar 29 (3) Mar 27 (1) Mar 26 (1) Mar 25 (5) Mar 24 (2) Mar 23 (1) Mar 19 (6) Mar 18 (32)
2014 © AHRC Burma